မော်ဒရေတာများအဖြစ် အပ်နှင်းပါသည်။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
25-03-2007, 04:07 AM
ဒီနေ့မှာတော့ ဖိုရမ်စတည်ထောင်စဉ်ကာလ ဘာမှမရှိသေးသော အချိန်မှစတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အသင်းသားနှစ်ဦးကို ၄င်းတို့
တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနေသော ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အချိန်ကုန်ခံ ၊ အပင်ပန်းခံ၍ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စေတနာပါပါဖြင့် ကူညီခဲ့သောကြောင့် လည်းကောင်း ၊ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှ မော်ဒရေတာများ လိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် တက်ကြွသူ ၊ အမှန်တကယ် အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီသူများဖြစ်ပါက မော်ဒရေတာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်မည် ဟု ကြေညာထားချက်အား ကိုက်ညီသောကြောင့်လည်းကောင်း အောက်ပါ အသင်းသားနှစ်ဦးအား ယနေ့မှစတင်၍ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အသီးသီးတွင်မော်ဒရေတာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြရန် အပ်နှင်းအပ်ပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကလျာနတ်, ကိုဂျိန်း, တက်တူး, ဖယောင်း, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, ဦးဟန်ညွန့်, မောင်သံသရာ, ၀တ်မှုံ, htun30, moe san dar, openeyes, phoetharlay, royalheartgate, thura.it, thureinsoe, yelinoo, zo
I'm so glad to have them ...
ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ ဤကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ များများရှိလေ ... တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လေလေပေါ့ဗျာ။ အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ... ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ တိုက်လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကောင်းသောပို့စ်များ ဒီရေအလား ပို့နိုင်ကြပါစေ။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ Tha Toe Naung® အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တက်တူး, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, မောင်သံသရာ, htun30, moe san dar, nay-oo, phoetharlay, thura.it, thureinsoe, zo
25-03-2007, 04:11 AM
အစစ အရာရာအတွက် ..ကိုရဲနောင် နှင့် ညီလေး သတိုးအောင် ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာမှ ကောင်းကောင်းမသိရှိသေးပေမယ့်
၀ါသနာအရ တတ်အားသ၍ ဖိုရမ်အကျိုးကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဟု ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တက်တူး, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, မောင်သံသရာ, htun30, moe san dar, nay-oo, thura.it, yelinoo, zo
တက်တူး, ရှင်းသန့်, မောင်သံသရာ, htun30, nay-oo, royalheartgate, thura.it, yelinoo, zo
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ..ကိုငြိမ်းချမ်းနှင့်ညီမလေး ၀ိုင်ချို တို့ဒီလိုဖြစ်တာကို..ဂုဏ်ယူပါတယ်..ကောင်းပါတယ်ကြိုးစားကြပါ..အနော် တော့နက်လေးရတာနှင့်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ msoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, thura.it, zo
ဒီဖိုရမ်ကိုစရောက်ရောက် ချင်း အားလုံး နဲ့ မစိမ်းအောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့ မ၀ိုင်ချို.... congratulation!! ပါ။
အခုမှ ပြောရတာနောက်တောင်ကျ နေဘီ...ဒါပေမယ့်..
i'm always remember yours kindness.
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, thura.it, zo
Become another one.
ဒီနေ့မှာတော့ အသင်းသား စတင်ဖြစ်ချိန်ကစပြီး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အထူးအသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ
ကို မော်ဒရေတာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အားလုံးလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် နဲ့ ဖိုရမ်တိုးတက်အောင် ကူညီကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တက်တူး, ဖယောင်း, ယွန်းယွန်း, ရှင်းသန့်, မောင်သံသရာ, moe san dar, phoetharlay, royalheartgate, thura.it, zo
Congratulation!!!:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 74 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ pi_pi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, nay-oo, THETKHAINGZAW, thura.it, zo
Find More Posts by pi_pi
25-03-2007, 04:19 AM
အထူးအသင်းဝင်များအားလုံးကို လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ ..
အားလဲ အားကျပါတယ် ...လုပ်ချင်တယ်ဗျာ ..
ကိုရဲနောင်ကြီးက ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ zayar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, nay-oo, zo
Find More Posts by zayar
25-03-2007, 04:20 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရဲနောင်......အရမ်းလဲ ၀မ်းသာ ပါတယ်ဗျာ......နောက်များ မှာလဲ တတ်နိုင်တဲ. ဘက်ကနေ အားလုံးကို ကူညီ ပေးချင် ပါတယ်ဗျာ.....
Last edited by လူဖုန်း; 13-11-2007 at 12:30 AM..
အကို ဒီနေ.တော. မော်ဒရေတာ ဖြစ်တဲ. အထိမ်းအမှတ်နဲ. ကျွန်တော် ဒကာခံ ပါ.မယ်ဗျာ ......ဟဲဟဲ ....ဒါပေမဲ.......မြန်မာတွေ ကတော. Cheer လို. မပြော ကြဘူးဗျ........မြန်မာတွေက ချကွ ချကွ ချကွ.....ဟဲဟဲဟဲ
Last edited by လူဖုန်း; 13-11-2007 at 12:31 AM..
Originally Posted by pi_pi
၀မ်းသာပါတယ်... လူဖုန်းရေ...:clap: :clap: :clap: :clap:
25-03-2007, 04:22 AM
Originally Posted by zayar
အကို ကြိုးစားပါဗျာ ....အားမလျှော. ပါနဲ. နောက်ထပ် အစီအစဉ် လေးတွေ ရှိဦးမှာပါ ......
ကြိုးစားတဲ. သူတွေ ကြိုးစားတာနဲ. တန်ရမှာ ပေါ.ဗျာ.....
Last edited by လူဖုန်း; 13-11-2007 at 12:33 AM..
25-03-2007, 04:23 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ sweet_wine© အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
25-03-2007, 04:24 AM
Originally Posted by sweet_wine?
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ sweet_wine© အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, aprilboy, zo
မမluphoneရေ... ခုမှဘဲဝမ်းသာကြောင်းပြောမလို့...ဟဲ..ဟဲ..တော်တော်နောက်ကျသွားတယ်...moderator ဖြစ်သွားတာကိုဂုဏ်ပြု့ပါတယ်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ HTET^HTET အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit HTET^HTET's homepage!
Find More Posts by HTET^HTET
ကျွန်တော်ဆို့ မော်ဒရေတာအသစ်တစ်ယောက်ကို ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ ဒီညီလေးကတော့
ဖြစ်ပြီး ပို့စ်တွေရွှေ.ပြောင်းရာမှာ သူကိုယ်တိုင် ကူညီပါမယ်လို့ ဆက်သွယ်လာတာဖြစ်ပြီး ပို့စ် ၂၅၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အနက် ၄ ညဆက်တိုက် ပို့စ် ၈၀၀ နီးပါးကို မအိပ်မနေ ရွှေ.ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကွန်ပျုတာပိုင်းမှာလဲ ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် သူတင်ခဲ့တဲ့ အကျိုးပြုပို့စ် တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့ မှ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အထူးအသင်းဝင် အဖြစ်မှ မော်ဒရေတာအဖြစ် တိုးမြှင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ညီလေး ဇော်သက် ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြပါခင်ဗျား။ ညီလေးဇော်သက် အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တက်တူး, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်သံသရာ, ko ye, moe san dar, royalheartgate, yelinoo, zo
30-06-2007, 03:14 AM
Re: Now we honour our moderators !
မြန်မာမိသားစု ခြောက်လပြည့်မှာ အားထားရတဲ့ အသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ကို မော်ဒရေတာအဖြစ် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ မြန်မာမိသားစုဝင်များကလည်း ညီလေး everlearner ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါဦး။
Last edited by Ye Naung; 30-06-2007 at 03:16 AM..
တက်တူး, ဖယောင်း, မောင်သံသရာ, moe san dar, royalheartgate, THETKHAINGZAW, yelinoo, zo
ကျနော်အရင်ဆုံး ဂုဏ်ပြုတယ်နော် ( ပြုနိုင်မှာပေါ့ ကိုရဲနောင်က ခေါ်ထားတာကိုး ) ...။ ညီလေး အဲဗားအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တကယ်လည်း အားကိုးရတဲ့သူပါ။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘီယာတိုက်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် (၆)လပြည့် အထိန်းအမှတ်နေ့မှာ moderator ဖြစ်လာတဲ့ ညီလေး everlearner
ရယ် အရင် မကြိုဆိုခဲ့ရသေးတဲ့၊ ညီငယ် ငြိမ်းချမ်း၊ လူဖုန်းလေး၊ naltharr ၊ Z.Thet နဲ့ ညီမလေး ဆွိ တို့
အားလုံးကို ဖိုရမ်ရဲ့ (၆)လပြည့် မွေးနေ့မှာ ဂုဏ်ပြုချင်းနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖိုရမ်အကျိုးကို ဆက်လက်
ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ။
ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ KZaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, yelinoo, zo
ဂုဏ်ယူပါတယ် everlearner ရေ :80: ။ ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်အတွက် တွဲဖို့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လက်တစ်စုံ၊ မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု၊ တီထွင်ထိုးထွင်းမယ့် ဦးနှောက်တစ်ခု တိုးလာတာပေါ့ဗျာ။ ဒီထက်ပိုပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားကိုးရမယ့်သားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် everlearner ရေဒီထက်မကအောင်မြင်မူ့တွေရရှိနိူင်ပါစေဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ thureinhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နောက်နောင် ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ..ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖိုရမ်အကျိုးကို ဆက်လက်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုအဲဗားရေ ..ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ..
ကိုအဲဗားတင်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေက ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်လေးတွေပါ ..
စာဖတ်သူကို အကျိုးရှိစေတဲ့ ပို့စ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် .. Congratulation !!
ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတာ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ..
ကျွန်တော် ပြန်ရတော့မှာမို့ အလုပ်များနေလို့ပါ ..
လေးစားရပါသော ..အားလုံးသော အက်ဒမင်ကြီးများ ..မော်ဒရေတာများ ..
မြန်မာ့မိသားစု အသင်းဝင် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကို
ကျွန်တော် ငြိမ်းချမ်းအောင် ဒီနေရာကနေပဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ် ..
အခါအခွင့်သင့်ရင် ပြန်လာပါဦးမယ် ..လို့ ..
မောင်သံသရာ, moe san dar
ကိုရင်တို့ ကိုအဲဗားတို့ .. အားလုံးကို ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ...
ကြိုးစားကြပါ ... မိသားစုကြီး စည်ပင်ဝပြောလာအောင် မြေတောင်များများမြှောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ..
ဗွီအိုင်ပီ ပူတူးရေ ... ယားယားလေးကို လက်ဘက်ရည်တို့ ... ဘာတို့ တိုက်ချင်ဘူးလား ဗျာ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ yaryarlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by yaryarlay
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ @ Y0E အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
@ Y0E ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by @ Y0E
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:06 AM